२०७९ जेष्ठ ४ बुधबार
वर्षमा ३ महिना रात पर्ने गाउँका मानिसहरुले आफ्नै कृत्रिम सूर्य बनाए !
काठमाडौं : पृथ्वीमा यस्ता ठाउँहरु छन् जहाँको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन । इटलीमा पनि यस्तो एउटा गाउँ छ जहाँ वर्षमा ३ महिना घाम देखिँदैन ।
आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भनेजस्तै यो गाउँका मानिसहरुले प्रकाश पाउनको लागि आफ्नै कृत्रिम सूर्य बनाएका छन् । इटलीको यो गाउँको नाम भिगानेला हो । यो देशको उत्तरी क्षेत्रमा पर्छ ।
यो गाउँ चारैतिरबाट पहाड र घाटीहरुले घेरिएको छ । यही कारण खासगरी जाडो मौसममा नोभेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म यहाँ अँध्यारो भइरहन्छ किनकि सूर्यको किरण यो गाउँसम्म पुग्न सक्दैन ।
लामो समयसम्म सूर्यको प्रकाश नपर्दा यहाँ रोगहरु फैलिन थाल्थे । प्रकाश नहुँदा मानिसहरुमा नकारात्मक मानसिकता, निद्राको कमी, मुड खराब हुने जस्ता समस्याहरुबाट ग्रसित हुन्थे र अपराध पनि बढ्थ्यो ।
अपहले भने या गाउँका मानिसहरुले अँभ्यारो हुने ३ महिनाको लागि प्रकाशको व्यवस्था गरेका छन् । यो गाउँका मानिसहरुले सन् २००६ मा १ लाख युरो खर्च गरेर ८ मिटर लामो र ५ मिटर फराकिलो स्टिल शीटको निर्माण गरेका छन् ।
यो पातामा प्रकाश परेपछि पूरै गाउँमा उज्यालो फैलिन्छ । सूर्यको मार्गको अनुसारण गर्नको लागि यसलाई कम्प्युटरसँग जोडिएको छ ।Nयो प्रविधिको प्रयोगको विषयमा कुरा गर्दै भि’गनेलाका मेयर पि’यरफ्रेंको मिडालीले भने ‘यो सजिलो थिएन ।
हामीले यसको लागि उचित सामग्री खो’ज्नु थियो । प्रविधिको बारेमा सि’क्नु थियो र विशेष रुपले पैसाको चिन्ता गर्नु ठूलो चु’नौती थियो ।
यो प्रविधिबारे बताउँदै एक वैज्ञानिकले भने ‘यो स्टिल शीटमा जडान गरिएको ऐनाले दिनमा ६ घण्टा सूर्यको प्रकाशलाई प्र’तिबिम्बित गर्छ ।’ मिडालीले भने ‘यो प’रियोजनाको पछाडिको विचारको वैज्ञानिक आधार भन्दा पनि मानवीय आवश्यकता हो ।’
२०७८ भाद्र १२, शनिबार २१:२१ गते 1 Minute 330 Views
नेपाली विद्यार्थीले बनाए १ युनिट बिजुलीमै १०० किमी गुड्ने विद्युतीय कार !
टिकटकजस्तै युट्युवको “शर्ट्स” मार्फत पनि आम्दानी गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइदै !
नेपालले दोस्रो भूउपग्रह प्रक्षेपणको तयारी गर्दै !
गृह मन्त्री खाण भन्छन् – बिजुलीको तारबाट अमेरिकी सेना हाेइन बिजुली नै आउँछ ।